Teregiramu inotangisa patsva patsva neinopera mamemo ekubatanidza uye nezvimwe | IPhone nhau
Mameseji masevhisi ari kuramba achichinja. Ndichiri WhatsApp inoedza kugonesa vashandisi vayo kuti vagamuchire zvakavanzika zveFacebook, Teregiramu inoedza kutora pfungwa dzevashandisi zviuru nezviuru nzira dzinogona kuitika. Iyo inogara iripo Teregiramu uye mabasa matsva senge mukana wekutamisa WhatsApp machats anoita kuti application ione nzira yekutiza kubva pane zvinosungirwa pachikamu cheFacebook icho vazhinji vasingagovane. Iyo nyowani vhezheni 7.5 yeTeregiramu inosanganisira inonakidza nyaya: auto-kubvisa mameseji mune ese chats, zvinongedzo kumapoka ane QR, anodhura ekukoka zvinongedzo uye zvimwe zvakawanda zvatinoongorora pazasi.
Mudiki asi anodherera: iyi ndiyo nyowani nyowani yeTeregiramu
Iyi yekuvandudza inounza yekuzvidzima-timer mameseji mune chero chat Zvakare, ikozvino mapoka anogona kuve nenhamba isingagumi yenhengo.
Imwe yemitambo yekutanga ndeyekubatanidzwa kwe mameseji anozviparadza. Rudzi rwemeseji urwu rwaitowanikwa mumachata ega. Nekudaro, Teregiramu yanga ichida kuitora kuenda kune dzimwe hurukuro. Vanogona kuzvibvisa mumaawa makumi maviri nemana kana mazuva manomwe mushure mekutakura Nekuti zvinoenderana neapp, "dzimwe hurukuro hadzina kuitirwa kuti dzigare nekusingaperi."
Maitiro ekuchinjisa ako WhatsApp mameseji kuTeregiramu
Ivo zvakare vakaverengerwa itsva nzira uye maturusi ekugovana kukoka zvinongedzo kumapoka, nhepfenyuro kana chiteshi. Iye zvino tava kukwanisa kugadzira tsika zvinongedzo zvinoshanda kwenguva shoma uye zvinogona kushandiswa nenhamba yakatarwa yevanhu. Uye zvakare, isu tinokwanisa kurodha pasi kodhi yeQR kushandura iyo yekukoka chinongedzo kuita nzira iri nyore yekuiwana.
Mukuwedzera, vane yakabatanidzwa matsva majeti eIOS 14 izvo zvinogona kuwedzerwa nekukurumidza kubva kumba skrini ye iPhone yedu. Pakupedzisira, ikozvino mapoka anogona kuve nenhengo dzisingagumi. Tinogona kushandura mapoka ari mumuganhu wevashandisi vanobvumirwa mumapoka enhepfenyuro asingagumi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Teregiramu inovhura nyowani yekuvandudza neinopera mamemo ekukoka uye nezvimwe